Iindlela ezintlanu eziPhambili ze-Android kwiOpera VPN | I-Androidsis
Ezona ndlela zintle ze-Android kwi-Opera VPN
Kule veki inye Iindaba zaqhekeza ukuba i-Opera izakususa i-Opera VPN usetyenziso kwiVenkile yokudlala kamva kule nyanga. Iindaba ezibambe abaninzi bengalindelanga kwaye ungafunda apha. Oku kuvalwa kunyanzela abasebenzisi ukuba bajonge ezinye iindlela kwesi sicelo. Nangona inkampani sele ibonelele ngenye indlela kubasebenzisi. Kodwa zininzi iiVPN ezikhoyo kwi-Android.
Ke ngoko, ngezantsi siza kukushiya kunye nezinye ezona ndlela zingcono kwiOpera VPN esinazo kwi-Android. Ke xa le nkonzo ivala iingcango zayo ekupheleni kwenyanga, sele sele unokukhetha olufumanekayo.
Zonke eziapps zeVPN ze-Android zifuna ukuzalisekisa iinkonzo ezifanayo ezibonelelwa yiOpera app eyaziwayo. Ke bonke bangabambeli bendalo besicelo ngokwaso. Ezi zezona zikhetho zibalaseleyo ezikhoyo ngoku:
1 I-SurfEasy VPN
4 Khawulezisa iVPN
5 Fihla.me VPN
Siqala ngokhetho oluvela kwi-Opera VPN Ncomela njengenye indlela yesicelo sabo. Inkonzo asinika yona iyafana kwaye isebenza kakuhle kakhulu. Ukongeza, lukhetho olubonakala lodwa inkonzo yabathengi ebhalwe igama lakho. Ke kwezinye iindawo ezinje, abasebenzisi bayaphumelela. Kuba baya kusombulula iingxaki ngqwalaselo epheleleyo. Inketho elungileyo, ekulula ukuyisebenzisa kwaye egcina imfihlo yethu ngawo onke amaxesha.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona sinokuthenga kunye nentengiso ngaphakathi kuyo.
SurfEasy VPN: Eyona Vpn yasimahla
Umthuthukisi: I-SurfEasy Inc.
Olu khetho lwesibini lusenokwenzeka ukuba lolona lwaziwayo ngabasebenzisi be-Android. Kuba yenye ye-VPNs ezimele ukhuseleko kunye nemfihlo. Ndiyabulela kolu khetho, sinokufikelela kwiiwebhusayithi zethu esizithandayo ngokutsiba naluphi na uhlobo lokubhloka ngenxa yendawo. Ukongeza, lukhetho olufanelekileyo xa usebenzisa iinethiwekhi zikaWiFi zikawonke-wonke, kuba ikhusela idatha yethu ngalo lonke ixesha. Enye yezinto ezilungileyo kakhulu kukuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye inoyilo olunomdla kakhulu.
Ukukhuphela le ndlela kwi-Opera VPN simahla. Nangona sifumana ukuthengwa ngaphakathi kuyo.
Umthuthukisi: I-TunnelBear, LLC
Okwesithathu, sinenye indlela eyaziwayo phakathi kwabasebenzisi be-Android. Olukhetho olufanelekileyo lokujonga, kuba ibeka ubumfihlo babasebenzisi njengeyona nto iphambili kuyo. Ngapha koko, tSineeseva kwihlabathi liphela, esivumela ukuba sidibanise iinethiwekhi ezininzi ezahlukeneyo kuxhomekeke kwinto esifuna ukuyenza ngalo lonke ixesha. Ke sinamathuba amaninzi kwisicelo. Njengokuba yima ngenkonzo yabo elungileyo kubathengi, ifumaneka yonke imihla yeveki.
Ukukhuphela esinye isicelo kwi-Opera VPN simahla. Nangona sifumana ukuthengwa ngaphakathi kuyo. Ukuthenga okunokudlula kwi-100 yee-euro kwezinye iimeko ezithile.
ExpressVPN -Kukhawuleza kwaye kuyimfihlo
Enye into elungileyo kwi-Opera VPN eyaziwayo kwiVenkile yokudlala. Imfihlo yabasebenzisi yeyona nto iphambili kuweKungenxa yoko le nto bengagcini idilesi ye-IP okanye imbali yabasebenzisi nangaliphi na ixesha. Singayisebenzisa ukuhamba kwaye singene kwiiwebhusayithi ezivaliweyo kwilizwe lethu. Nangona Kuyanceda xa uqhagamshela kwinethiwekhi ye-WiFi yoluntu. Ukuze ungayiboni into esiyenzayo kwaye ungakhuselekanga kwizisongelo kuyo.
Khawulezisa -I-VPN yoSasazo oluBukhoma
Umthuthukisi: Qhagamshelana Inc.
Okokugqibela kwezinye iindlela kwi-Opera VPN yile app. I-VPN elula, kunye noyilo olukhululekile ukuyisebenzisa kubasebenzisi kwaye iyifezekisa ngokugqibeleleyo imisebenzi yayo. Isivumela ukuba sihambe ngokukhuselekileyo nangokuzimeleyo naphi na apho sikhona. Ukongeza, lukhetho olunokuthi ivelela isantya sonxibelelwano, Into abasebenzisi abayakuyixabisa ngokuqinisekileyo. Olunye ukhetho olulungileyo lokujonga.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona sinokuthenga ngaphakathi kuyo.
fihla.me VPN - ngokukhawuleza kwaye ukhuselekile ngeVPN ephindwe kabini.
Umthuthukisi: I-eVenture Ltd.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona ndlela zintle ze-Android kwi-Opera VPN
I-Facebook ihlaziya useto lwabucala kunye nolwakhiwo lwe-app